घटेको बजारमा मुक्तिनाथ विकासको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण : | आर्थिक अभियान
घटेको बजारमा मुक्तिनाथ विकासको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :
असार १, काठमाडौं । विकास बैंक मध्येकै सबैभन्दा बढी चुक्तापूँजी भएको मुक्तिनाथ विकास बैंक हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५ अर्ब ६५ करोड रहेको छ ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १ अर्ब २ करोड भन्दा बढी नाफा कमाएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. १ अर्ब ५६ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवमा कम्पनीले जगेडामा रू. १ अर्ब ५६ करोड र रिटेण्ड अर्निङमा रू. ५५ करोड ३४ लाख सञ्चित गरेको छ ।
हाल कम्पनीले १७२ शाखा कार्यालयहरुबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रद्युमन पोखरेल रहेका छन् भने अध्यक्षमा भरत राज ढकाल रहेका छन् ।
कम्पनीले आव २०७७/७८ सम्मको मुनाफबाट शेयरधनीलाई १७ दशमलव ५७ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ९२५ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि वितरण गरेको हो । कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत भइसकेको छ ।
कम्पनीले पाँच आवमा शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांश टेबलमा देखाइएको छ । उक्त टेबलका अनुसार कम्पनीले २०७३/७४ मा शेयरधनीलाई सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको हो ।
बुधवार कम्पनीकोे शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४२० मा झरेको छ । यो शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ७ रुपैयाँ ४० पैसा घटेको हो । बुधवार शेयरमूल्य एक वर्षयताकै न्यून विन्दुमा झरेको हो । २०२१ जुन १४ मा कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७१९ थियो । यसरी हेर्दा कम्पनीको शेयरमूल्य एक वर्षमा ४१ प्रतिशत घटिसकेको छ ।
बुलिस मार्केटमा ३ हजार २०० मा पुग्दा कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ८०९ सम्म पुगेको थियो ।
कम्पनीको ५ आवको नाफाको ट्रेण्ड :
मार्च १६ २०२२ १५ जुन २०२२
५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा लामो पुच्छर भएको कालो मैनबत्ती आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले कम्पनीका शेयरमूल्य घट्ने संकेत गर्छ । यद्धपि कम्पनीको शेयरमूल्य एक वर्षयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । सोही कारण अब कम्पनीको शेयरमा विस्तारै खरीदकर्ता आउने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
५८ दिनको कारोबार अवधिमा आरएसआई ३० दशमलव ७९ विन्दुमा रहेको छ । यो ओभरसोल्ड जोनमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा विक्री चाप रहेको देखिन्छ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ७ दशमलव १४ विन्दुमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । कम जोखिमयुक्त र पूर्वानुमान गर्न सजिलो हुन्छ । लाभ पनि न्यून हुन सक्छ ।
हालको शेयरमूल्य ७ दिने र १४ दिने एक आपसमा नजिकिन खोजेका छन् । यी दुई रेखाभन्दा हालको शेयरमूल्य तल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ७ दिने रेखाले २६ दिने रेखालाई तलबाट काटेर माथि गएमा शेयरमूल्य बढ्ने गर्दछ भने २६ दिने रेखामा प्रतिरोध पाएर फर्किएमा मूल्य घट्ने देखिन्छ । बुधवारको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४२० महँगिएमा रू. ४४५ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।
(यद्धपि हामीले उपलब्ध तथ्यांकको अधारमा गरेको विश्लेषण आफैमा पूर्ण होइन, लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको समग्र आधारभूत पक्ष र प्राविधिक पक्ष हर्नु आवश्यक रहेको छ ।)
घटेको बजारमा मुक्तिनाथ विकासको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण : [२०७९ असार, १]
१ वर्ष यताकै न्यून विन्दुमा झर्‍यो नेपाल लाइफको शेयरमूल्य, हेरौं आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण : [२०७९ जेठ, २२]
३० % हकप्रद शेयर निष्कासन गरिरहेको शिखर इन्स्योरेन्सको कम्पनी विश्लेषण : [२०७८ चैत, ९]
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकसहित ३ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट [२०७८ पौष, २७]
७ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट, बीमा कम्पनीको शेयरमा झुम्मिए लगानीकर्ता [२०७८ पौष, ११]
यो साता नेप्से परिसूचक ५% भन्दा बढीले घट्यो : कुल बजार पूँजीकरणमा करीब २ खर्बको कमी [२०७८ मंसिर, १८]